तर जे कुरा पनि अति भयो भने खति हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका टीमका केही मानिसहरुले यसलाई ‘लोक रिझांई’को ‘तुरुप’ बनाउन खोजे जस्तो महसुस हुँदैछ । Read More…
हाम्रा नेताहरु, मन्त्रीहरु र हाकिमहरु कुर्सीको पछाडी किन टावेल राख्छन? यो प्रस्न संगै मैले एउटा किस्सा सम्झीए.
घटना ४/५ बर्ष अघिको हो . राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक सुधारका लागि म्यानेजमेन्ट विदेशीलाई ठेक्कामा दियो . नेपाली जुनियरहरुले अंग्रेजी हाकिमलाई खुसि पार्न नया कुर्सि किने र कुर्सीमाथी दामी टावेल हाली दिए . चलनै यस्तै थियो, त्यसैले त्यहि गरे. अमेरिकन हाकिम आयो, दाँया- बाँया हेर्यो . सबै हाकिमका कुर्सि उस्तै, आफ्नो त झन् टावेल अझै चम्किलो !
उसले कुरो बुझेन र आफ्नो सहायकलाइ सोध्यो- “किन तिमेरु बिहान नुहाउदैनौ ? सुइमिंग गर्दैनौ?”
सहायकले हाकिमको कुरो बुझेन र सोध्यो- ‘ह्वाई आर यु आस्किंग दिस सर ?’
हाकिमले सरल उत्तर दियो- “सुन डियर, सुइमिंगमा नजाने भए किन मेरो चिएरमा टावेल राखिदिएको त ?! आइ डन्ट निड टावेल एंड आइ डन्ट स्विम इन अफिस टाएम!”
मलाइ पनि पार्टी वा नेपाली संगठनका कार्यालयहरुमा पदाधिकारी र हाकिमहरुको कुर्सि छोपेर नयाँ ‘गम्छा’ राखेको देख्दा सिकसिको लागेर आउछ . हात धुन र पुछ्न राखेको होला भानु भने ती चिज त बाथरूममा नै राख्नु पर्ने हो! कुर्सीमा तन्ना ओछ्याए जस्तो त नगर्नु पर्ने नी?!
यो ‘कल्चर’ कसले थालेछ र किन? मेरो यो जिज्ञासामा एकजना मित्रले यस्तो कथा सुनाउनु भयो-
“घटना ब्रिटेनले भारतलाइ उपनिवेस बनाएपछी को हो. भारत कब्जापछी एकजना ब्रिटिस अफिसर पुराना रजौटाको अफिसमा पसेछ . अफिसको कुर्सीमा बस्नै लाग्दा उसलाई “डर्टी इन्डियन” को फिलिंग झल्यास सम्झना भएछ . अनि उसले छि: छि: भन्दै आफ्नो धुपौरेलाई हकारेछ-“के हि त गर, मैले बस्न लाएक त बनाओ न यो कुर्सि लाई !!”
उसको चम्चाले कुर्सीमाथि टावेल हाली दिंदै भनेछ – सर, इट इज अल राइट नाउ…’
परम्परा यसरि चल्यो, अंग्रेजले भारतमा रहुन्जेल कुर्सीमा टावेल हालेरै राज गरे रे ! सन् १९४७ मा अंग्रेजले भारत छाडे .
भारतमा भारतीयकै सासन सुरु भयो, तर कुर्सिमाथी गम्छा राख्ने अंग्रेजी चलन हटेन, उनीहरुले यसलाई “हाकिम हुनुको सान” ठाने . Read More…